Mana hidhaa Qilinxoo Guban Kanneen jedhamaniif Jala Murtiin Kennamee Jira. Abukaatoo
Kilinto prison fire
Himannaan kun kan irratti dhiyaate namoota 38 kaleessa Caamsaa 8 bara 2018 mana murtii duratti dhiyaatanii turan.Isaan kana keessaa 11 walaba akka gadhiifaman 23 himannaan irratti dhiyaate foyyaffamee of-irraa akka ittisan kanneenhafan 4 garu himatii isaanii ajjechaa waliin kan wal qabatuu akka ta’e itti himame.
Himatamtoota 38 keessaa soddomaaf abukaatoo kan ta’an Obbo Wandimmuu Ibsaa akka jedhanti himatamtoota kana hundumaa irratti ragaa ta’uun kan dhiyaatan hiriyyoota isaanii waliin hidhamanii jiranii fi polisoota mana hidhaa Qiliinxoo ti.
Himatamtoonni soddomii saddeet ammaan dura mana murtii duratti dhiyaatanii akka ibsanti hiriyyoota keenya qeensa buqqisaa fi dudda isaanii irrtti Mismaara waqaraa dararanii akka isaan nu irratti ragaa ba’an godhan jedhu.Yoo ragaa ba’uu didan isaaniin deebisanii akka hidhan qorattonni dorsiisaa turan jedhu.
Kanaaf dararaa wal fakkaataa qorattonni nu irraan ga’an sodaannee waan hin hojjannee fi hin beekne fudhannee jedhu himatamtoonni .
Kanas kaawunsiliin mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa gabaasuu isaa dhaddachatti ibsaa turan.
Gaaffii fi deebii Gggeeffame caqasaa